नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएशनका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठका यसपाली ४५ देखि ५० लाख रुपैयाँको मात्रगुलाबआयात गरिने छ । प्रेम दिदवसका लागि दुई लाख स्टिक गुलाबको मागमध्ये एक लाख स्टिक स्वदेशमा नै उत्पादन भएको छ ।
Previous Previous post: आइसिसी वल्र्ड क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप : २४ खेलाडी छानियो, को को परे ?
Next Next post: राजधानीमा मोनो (स्काई) रेल कुद्ने, कस्तो हुन्छ त ?
फिल्म ‘दर्पण छायाँ २’ को ट्रेलर रिलिज
‘द कलेज एम्बेसडर २०१७’को उपाधि सारम्स बिक्रम र सरोजा श्रेष्ठलाइ
२०७३ मा सामाजिक सञ्जालमा सर्वाधिक चर्चित काण्डहरु !
भारतीय सिनेमाको नम्बर १ ब्लकबस्टर साबित बाहुबली टु !